app yeios inobvumira iyo apple iphone 7 kuwedzera kuteedzera iyo nhema mifananidzo yekuvhenekera kumashure kubva iphone 8 / x
Kuru Nhau & Ongororo App yeIOS inobvumira iyo Apple iPhone 7 Plus kuteedzera iyo nhema Portrait Mwenje kumashure kubva ku iPhone 8 / X
Focos inobvumidza vashandisi ve iPhone 7 Plus kuve nePortrait Lighting-esque maficha Avo vane iyo Apple iPhone 7 Plus vangangonzwisisike vanoshuvira kuti dai vaikwidziridzwa kuApple iPhone 8 Plus kana Apple iPhone X, kunyanya kana vachida iyo Portrait Lighting ficha pane mhando nyowani. NePortrait Mwenje, vashandisi vanogona kugadzira kumwe kudzika mhedzisiro neiyo kumashure kweiyo portrait, inosanganisira dema kumashure iyo inovanza zvachose iyo nzvimbo iyo mufananidzo uyu wakabvarurwa.
Kusvika parizvino, avo vane iyo iPhone 7 Plus vaifanira kuita jailbreak foni yavo kuti vawane chinhu icho. Asi ikozvino, iyo yekutora mifananidzo inonziSpotlightsiyo yatove yakagara muApp Store, yawedzera chinhu chitsva chinonzi 'Black Portrait' modhi iyo inobvumidza iyo iPhone 7 Plus kushandisa zvimwe zvakafanana Portrait Mwenje sarudzo dzinowanikwa pane iyo iPhone 8 Plus uye iPhone X. Kudzika mhedzisiro yakafanana kune izvo Portrait Mwenje inopa inowanikwa uchishandisa iyo 'Nhema Portrait' uye 'Yekupedzisira Mufananidzo' mafirita.
Focos ndeye yemahara app uye inoda kuti iyo iPhone iyo yakarongedzwa paine mbiri-kamera setup yeiyo 'Black Portrait' maitiro. Izvi zvinoreva kuti ficha yacho inongowirirana neiyo iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus uye iPhone X. Mamwe ese makomputa maficha maficha anowanikwa kubva kuapp anogona kushandiswa paApple iPhone 5s kana gare gare, inomhanya iOS 11 kana kupfuura. Kuti utore download yacho pafoni yako, tinya pane izvi batanidzo .
wongororo samsung galaxy grand prime
iphone 11 pro vs xs yakakura
Unoziva here kuti ndeipi inotakura nharembozha pasi rose?
Iyo yazvino Samsung Galaxy Watch 3 yekuvandudza inosanganisira boka rezvinhu zvitsva zvehutano maficha
Apple Watch & apos; s kudonha kwekuonekwa chinhu chinokundikana hilariously paterevhizheni yenyika
T-Nhare yekubatanidza Sprint & apos; s 5G network kufukidza nekukurumidza nechokumusoro pamusoro peVerizon
T-Mobile inosimbisa hombe zvitoro zvekuwedzera zvirongwa kune Best Buy uye Walmart, pamwe neyeMetro brand
Maitiro ekuwana uye kuverenga zvakadzingwa zviziviso muApple
Gmail yeApple ikozvino inokutendera kuti ubvise maemail atotumirwa kare
SDET Unicorn - Nei zvakanyanya Kuoma Kubhadhara SDETs?